I-Ocean Front Cottage: Izulu Elincane - I-Airbnb
I-Ocean Front Cottage: Izulu Elincane
Bremen, Maine, i-United States
I-indlu eyakhiwe ngamapulangwe ephelele ibungazwe ngu-Sharon & Dick
U-Sharon & Dick Ungumbungazi ovelele
Awukwazi ukusondela ogwini lwaseMaine. Ikotishi lihlala ethekwini eduze kwe-cove encane. Ibhishi le-Low tide, indawo yokubhukuda kwamagagasi aphezulu, namagagasi azulazulayo eduze konqenqema kwenza lokhu kube indawo enhle yokuhosha isivakashi esisodwa noma ezimbili.
Ikotishi lihlinzeka ngakho konke okudingayo ukuze uhlale unethezekile: Umatilasi omusha nezingubo zokulala, izihlalo ezinethezekile zokuphumula nokudla, ikhishi lokudla okulula, nefenisha yompheme ukuze ujabulele ukuhlala ngaphandle. Ukugoqa amafasitela kunikeza ukubuka kwe-cove kanye nokufinyelela kumoya ohelezayo wasehlobo. I-heater igcina ikhabethe limuncu ngezinsuku ezipholile.
Sitholakala ezindaweni ezihlala unyaka wonke ezindlini nasezindlini zasehlobo. Indawo eseduze (.5 miles) ye-Audubon inikezela ngezindlela zokuhamba. I-Damariscotta kanye ne-Round Pond, imizuzu eyi-15 ukusuka lapho, inezindawo zokudlela eziningi nezitolo, nemipheme. Ukushayela isigamu sehora kuzokuletha e-Camden nase-Rockland lapho unokufinyelela okwengeziwe ezindaweni zokudlela namamnyuziyamu. I-Midcoast iyindawo enhle yaseMaine ekhanga abantu abafuna ukubuka indawo yogu olunamadwala kuyilapho bejabulela nokuhluka kwedolobhana ngalinye.
Ibungazwe ngu-Sharon & Dick
Sizobingelela isivakashi futhi sisisize ukuthi sijwayelane nezokungcebeleka namasiko endaweni. Siseduze nezinto eziningi ezikhangayo eMidcoast. Sithemba ukuthi izivakashi zethu zizokujabulela lokhu kuphumula okunokuthula njengoba senza futhi sizotholakala ukuze siqinisekise ukuthi ukuhlala kwazo kunethezekile.
Sizobingelela isivakashi futhi sisisize ukuthi sijwayelane nezokungcebeleka namasiko endaweni. Siseduze nezinto eziningi ezikhangayo eMidcoast. Sithemba ukuthi izivakashi zethu ziz…
USharon & Dick Ungumbungazi ovelele